Avadiho ny jpg ho jpg: tadiavo ny fomba tokony hanaovanao azy | Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nahita fa nahatratra izay notadiavinao na izay tadiavinao, ary tampoka teo dia ilainao amin'ny endrika hafa izany. Ary tsy hainao ny manao azy. Ny iray amin'ireo fanontaniana mahazatra indrindra dia ny fanovana PDF ho JPG. Eny, antontan-taratasy (izay mety misy sary, kisary ...) amin'ny rakitra sary. Ahoana no anaovanao an'izany?
Raha mandinika azy io koa ianao dia fotoana tokony hahalalanao azy. Noho izany, te-hanampy anao izahay izao hainao ny mamadika PDF ho JPG. Ary na dia heverinao ho hadalana aza izany, dia afaka mamonjy anao tsy handany ora sy ora maro hanandrana hitady ny vahaolana (tsy mampiasa Internet pejy).
1 Inona no atao hoe PDF
2 Inona no atao hoe JPG
3 Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG
3.1 Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG amin'ny Adobe Acrobat
3.2 Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG amin'ny Photoshop
3.3 PDF mankany JPG miaraka amin'ny programa hafa
3.4 Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG an-tserasera
Ny zavatra voalohany hataonay dia ny miresaka aminao momba ny PDF, satria mety tsy mahafantatra bebe kokoa noho izany ianao dia karazan-drakitra izay tsy novaina mazàna ary manome endrika matihanina ny antontan-taratasinao.
Raha ny marina, PDF dia fantatra amin'ny hoe Portable Document Format. Amin'ny endrika Espaniola, Portable Document Format. Izy io dia ampiasaina hijerena ireo antontan-taratasy izay nalamina tsara sy namboarina izay ahitanao lahatsoratra, sary, sary, latabatra ... Amin'ny Internet dia ampiasaina, ohatra, ny "fanomezana" minibook na torolàlana azo ampiharina. Fa ny fampiasana azy dia ny fampisehoana ihany koa ny sanganasa, fandaharam-pianarana, boky mirindra, sns.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka endrika mihanaka tokoa isika, miaraka amina fampiasana maro. Ankehitriny, manana ny olana izy fa matetika ny PDF dia tsy azo ovaina, izay midika fa, raha misy ny lesoka, dia azo tazonina izany raha tsy manana ny antontan-taratasy tany am-boalohany ianao na programa izay manitsy PDF (mazàna dia aloa izy ireo).
Amin'ny tranga JPG, endrika sary io. Ireo no fanafohezan-teny manondro ireo vondrona manam-pahaizana momba ny sary miaraka. Izy io dia miavaka amin'ny famoretana ireo sary tsy misy io famoretana io izay midika fatiantoka kalitao, na dia very kely aza izy ireo.
Ity fanitarana sary ity no fahita indrindra hitanao amin'ny Internet, miaraka amin'ny GIF, PNG ary, ny WebP fantatra ankehitriny. Manohana azy ny mpitsidika, ny mailaka, ny tambajotra sosialy ... Nefa mavesatra matetika izy io rehefa voatazona ny kalitaon'ny sary.
Amin'ny mailaka dia azo ampidirina ao anatin'ny boaty izay nanoratana azy, fa azo ampiarahina koa (miaraka amina endrika hafa). Ny olana dia ireo endrika hafa ireo dia mety tsy manana topi-maso, izay ny tranga misy amin'ny JPG.
Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG
Betsaka ny toe-javatra mety ahitanao ny tenanao izay manome antony tokony hahalalanao mamadika PDF ho JPG. Ary io dia, rehefa mitranga ny mifanohitra amin'izay, ianao dia mety mila endrika roa mitovy endrika na rakitra.
Noho izany, eto izahay dia hanome anao safidy isan-karazany hahafahanao manova PDF ho JPG.
Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG amin'ny Adobe Acrobat
Ny safidy voalohany omenay anao hanova PDF ho JPG dia ny fampiasana ny Fandaharana Adobe Acrobat izay matetika no mahazatra amin'ny fanokafana rakitra PDF. Ary inona no tokony hataonao hahazoana sary?
Tokony hanokatra ny rakitra PDF amin'ny Adobe ianao. Manaraka, tsindrio Export PDF (tokony hiseho eo amin'ny tontonana ankavanana). Apetraho fa mila sary ianao ary fantaro hoe inona ny endrika (amin'ity tranga ity JPEG, izay mitovy amin'ny JPG).
Izao fotsiny ianao dia tsy maintsy mikapoka ny bokotra fanondranana ary hiseho ilay boaty Save as. Lazao hoe aiza no tianao hitadiavana ilay sary ary kitiho raha te hitahiry. Ary dia izay, tsy mila manao zavatra hafa ianao.
Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG amin'ny Photoshop
Gaga ve ianao? Izy io dia manana hafetsena kely, ary izany dia tsy azonao atao afa-tsy io raha toa ka pejy iray ny PDF, satria tsy afaka hiova intsony ianao.
Rehefa manokatra rakitra PDF amin'ny Photoshop ianao, ny zavatra mahazatra dia ny manokatra ilay takelaka voalohany ihany, tsy ny hafa. Na dia amin'ny maoderina indrindra aza, mamela anao hisafidy ny pejy tianao hosokafana (hamela anao iray ihany).
Ny zavatra tsara dia, rehefa vantany vao nosokafanao izany dia azonao atao ny manitsy azy, manova azy ary, farany, fa tsy mikapoka save, dia tokony handeha ho Save ianao. Ao no hanovanao ny fanitarana ny PDF ho JPG ary ho vonona izy.
Raha mila maromaro amin'ireto pejy ireto ianao, na izy rehetra dia tsy maintsy vitaina amin'ny tanana, izany hoe tsirairay amin'ny programa. Rehefa maro ny antontan-taratasy dia somary manahirana ihany, fa raha vitsy izy ireo, dia mety ho safidy azo atao.
PDF mankany JPG miaraka amin'ny programa hafa
Ho fanampin'ireo roa noresahinay ireo dia maro ny PDF ho an'ireo mpanova JPG amin'ny alàlan'ny programa apetrakao amin'ny solosainao. Ny sasany amin'izy ireo dia:
Mpanova PDF Windows 10
Ahoana ny fomba hanovana PDF amin'ny JPG an-tserasera
Raha matoky ianao fa mampakatra ny antontan-taratasy PDF amin'ny Internet, satria mampahatsiahy anao izahay fa raha vao mampakatra azy ianao dia tsy voafehinao intsony izay azo atao amin'io antontan-taratasy io dia misy pejy an-tserasera vitsivitsy izay azonay atao mba hanatanterahana ny fiovam-po.
Saika ny ankamaroan'izy ireo dia manana fandidiana mitovy amin'ity manaraka ity:
Ampidiro ny tranokala izay manintona ny sainao na manome anao fiarovana bebe kokoa hampakaranao ireo antontan-taratasinao ao amin'ny tobiny.
Ankehitriny, tsy maintsy mampakatra ilay rakitra PDF tianao hivadika ho JPG ianao. Miankina amin'ny fifandraisanao, afaka segondra vitsy na minitra vitsivitsy vao hampakatra azy (miankina amin'ny haben'ny PDF koa izany).
Raha vao nakarina, dia hangataka aminao izy ireo hanamafy ny fiovam-po ho JPG. Amin'ny pejy sasany dia avelany hanamboatra toetra samihafa an'io JPG io ianao, ohatra ny kalitao tianao hananana, ny lanjan'ilay sary, sns.
Mbola hiandry fotoana fohy (segondra, minitra) indray ianao vao hanana ny sarin'io PDF io.
Ny sisa tavela dia ny fampidiranao ny sary novokarina.
Raha manahy ianao amin'izay mety hitranga amin'ny antontan-taratasy izay nampakarinao ho an'ny mpizara azy, azonao atao izany vakio ny fepetran'ny serivisy alohan'ny hanaovana zavatra rehetra ary zahao raha, rehefa kelikely, manimba ny vaovao izy ireo, na inona no ataon'izy ireo amin'izany.
Y pejy web inona no atolotray? Ireto, ireto manaraka ireto:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Avadiho ny jpg ho jpg